Marketing sy atiny Marketing rafitra | Martech Zone
Fitantanana votoaty, varotra votoaty ary vokatra traikefa amin'ny mpampiasa, vahaolana, fitaovana, serivisy, paikady ary fomba fanao tsara indrindra ho an'ny orinasa avy amin'ny mpanoratra Martech Zone.
Inona no atao hoe angona aotra, antoko voalohany, antoko faharoa ary fahatelo
Talata, May 17, 2022 Wednesday, May 18, 2022 Douglas Karr
Misy adihevitra ara-pahasalamana an-tserasera eo amin'ny filan'ny orinasa hanatsarana ny lasibatra amin'ny angon-drakitra sy ny zon'ny mpanjifa hiaro ny angon-dry zareo manokana. Ny hevitro manetry tena dia ny orinasa dia nanararaotan'ny angon-drakitra nandritra ny taona maro ka ahitantsika ny fanoherana ara-drariny manerana ny indostria. Na dia tena tompon'andraikitra aza ny marika tsara, ny marika ratsy dia nandoto ny dobo momba ny varotra angona ary manana fanamby goavana isika: Ahoana no hanatsarantsika sy
Mpanoratra: Mamorona, avoaka ary ampiharo ny torolalana momba ny feo sy ny fomban'ny marikao miaraka amin'ity mpanampy mpanoratra AI ity
Alakamisy, May 12, 2022 Alakamisy, May 12, 2022 Douglas Karr
Tahaka ny orinasa iray mametraka torolàlana momba ny marika mba hiantohana ny tsy fitoviana manerana ny fikambanana, dia zava-dehibe ihany koa ny famolavolana feo sy fomba mba hifanaraka amin'ny hafatrao ny fikambananao. Ny feon'ny marikao dia tena ilaina amin'ny fampitana am-pahombiazana ny fanavahanao sy ny firesahana mivantana sy ny fifandraisana ara-pihetseham-po amin'ny mpihaino anao. Inona no atao hoe Torolàlana Feo sy Fomba? Raha mifantoka amin'ny logos, endri-tsoratra, loko ary endrika hafa hita maso ny torolalana momba ny marika hita maso, feo iray
Ohatra 6 amin'ny fitaovana ara-barotra amin'ny fampiasana Artificial Intelligence (AI)
Ny faharanitan-tsaina artifisialy (AI) dia lasa iray amin'ireo teny filamatra ara-barotra malaza indrindra. Ary noho ny antony marim-pototra - AI dia afaka manampy antsika hanao automatique ny asa miverimberina, hanamboatra ny ezaka ara-barotra, ary handray fanapahan-kevitra tsara kokoa, haingana kokoa! Raha ny momba ny fampitomboana ny fahitana marika dia azo ampiasaina amin'ny asa maro samihafa ny AI, ao anatin'izany ny marketing influencer, ny famoronana votoaty, ny fitantanana ny media sosialy, ny famoronana fitarihana, ny SEO, ny fanovana sary, ary ny maro hafa. Eto ambany dia hijery ny sasany amin'ireo tsara indrindra isika
Lucidchart: Miara-miasa ary alaivo sary an-tsaina ny Wireframes, Charts Gantt, fizotran'ny varotra, automatique ara-barotra ary ny dian'ny mpanjifanao
Ny fijerena sary dia tsy maintsy atao rehefa miresaka amin'ny antsipiriany dingana sarotra. Na tetik'asa misy tabilao Gantt mba hanomezana topimaso ny dingana tsirairay amin'ny fametrahana teknolojia, automation ara-barotra izay manondraka ny fifandraisana manokana amin'ny mpanjifa na mpanjifa, fomba fivarotana mba hijerena ny fifandraisana mahazatra amin'ny fizotran'ny varotra, na dia kisary fotsiny aza. alaivo sary an-tsaina ny dian'ny mpanjifanao… ny fahafahana mijery, mizara ary miara-miasa amin'ny dingana
Ahoana ny fomba hitazomana ny datin'ny zon'ny mpamorona anao havaozina amin'ny programa amin'ny tranokalanao na fivarotana an-tserasera
Niasa mafy izahay namolavola fampidirana Shopify ho an'ny mpanjifa iray izay matanjaka sy saro-takarina… mbola ho avy izany rehefa mamoaka azy izahay. Miaraka amin'ny fivoarana rehetra ataonay, sadaikatra aho rehefa nanandrana ny tranokalany mba hahitana fa lany daty ny filazana momba ny zon'ny mpamorona ao amin'ny footer… naseho tamin'ny taon-dasa fa tsy tamin'ity taona ity. Fanaraha-maso tsotra izany satria nasiana kaody saha fampidirana lahatsoratra haseho